​महंगो पर्न गयो ‘पिरतीको बर्को’– किरण केसी
Mon, Aug 20, 2018 | 01:47:17 NST
बुधबार राईजिङ मलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सिनेमा ‘शत्रुगते’को दोस्रो गीत ‘पिरतीको बर्को’ सार्वजनिक गरियो । जतिले यो गीतको भिडियो हेरेका छन् सबैले गीत राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
बुधबार दिउँसो साढे तीन बजे सार्वजनिक भएको यस गीतलाई यो समाचार तयार पार्दासम्म २ लाख ७९ हजार भन्दा धेरै पटक हेरिएको छ । बिहीबार हामीले सिनेमाका प्रस्तुतकर्ता किरण केसीसँग पिरतीको बर्को विशेष गफगाफ गरेका छौँ ।
‘शत्रु गते’को गीत १७ गते सार्वजनिक गर्ने साइत जुरेको हो वा संयोग परेको हो ?
यो हामीले जुराएको भने हैन । संयोगवस जुर्न गएको हो ।
यो गीतको छायाकंन कतिदिनमा पूरा भएको हो ?
४ दिनमाहामीले यसको छायांकन सकेका थियौँ ।
यो गीतको छायांकन कहाँ–कहाँ गर्नुभयो ?
यसमा लोकेशन र ड्रेस धेरै परिवर्तन भएको छ । हामीले गीतमा निकै मिहेनत गरेको छौँ । यसमा प्रयोग भएको ड्रेस, समय र लोकेशनले गर्दा यो गीत खिच्दा अलि महंगो रकम नै परेको छ । अहिलेको युवा पुस्तालाई फोकस गरिएको गीत हो यो र खुसीको कुरा सार्वजनिक भएपछि पनि सबैले मन पराईदिनु भएको छ । हाम्रो मिहेनत खेर गएको छैन ।
तपाईँको नजरमा दोस्रो गीत पहिलो भन्दा राम्रो कि कस्तो ?
‘रुपै मोहनी’मा हामीले पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्तालाई समावेश गरेका छौँ । नाम चलेका टाउके टाउके कलाकारहरु छन् । दोस्रो गीतलाई भने नयाँ पुस्ताका कलाकार पल र आँचललाई समावेश गरेका छौँ । यो गीत युवा पुस्तामा फोकस त भई नै हाल्यो । यसका अलावा बुढाबुढी र बच्चाबच्चीलाई पनि मन पर्छ भन्ने आशा छ । त्यसमाथि पनि कालिप्रसादको गीत हो यसलाई दर्शकले रुचाउनु भएको छ र अझै रुचाउनु हुन्छ भन्ने आशा छ । अनि अर्को कुरा हामीले यो गीतमा कुनै पनि सम्झौता नगरी निकै मेहनत गरेर खिचेका हौँ ।
गीत कसरी जुर्न गयो सिनेमाको लागि ?
हाम्रो सिनेमा तीन पुस्ताको सिनेमा हो । कथा अनुसार पल र आँचल छोरा र छोरीको भूमिकामा छन् । हाम्रो कथा अनुसार कालिलाई यो गीत बनाउन झण्डै पाँच महिना नै लाग्यो । हाम्रो सिनेमासँग मिल्ने गीत खोजेर उहाँले निकै मिठो बनाउनु भएको छ ।
ट्रेलर कहिले रिलिज गर्नुहुन्छ ?
हामीले यसको टिजर २६ गते सार्वजनिक गर्ने भएका छौँ । अनि ट्रेलर सिनेमा आउनुभन्दा १५/१६ दिन अघि रिलिज गर्छौँ ।